Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Emirates iyo Gulf Air: Tartan dambe ma jiro?
Airlines • Aviation • Wararka Baxrayn • Jebinta Wararka Caalamka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Emirates waxay ka shaqeysaa Dubai, UAE, halka Gulf Air ay xarunteedu tahay Bahrain. Labada shirkadoodba waxay ku tiirsan yihiin safarka gaadiidka. Tilmaamaha ugu horreeya ee iskaashiga iyo laga yaabee in ka badan ayaa ka soo baxaya Dubia Airshow.
Emirates iyo Gulf Air waxay kala saxiixdeen Heshiis Isfaham (MoU) si ay u horumariyaan iskaashi ganacsi oo qoto dheer oo ka dhexeeya labada shirkadood.
Is-afgaradku wuxuu dejin doonaa qaabka u dhexeeya labada shirkadood si loo dhiso iskaashi suurtagal ah oo codeshare ah oo ka dhexeeya shabakadaha diyaarad kasta, taasoo kordhinaysa faa'iidooyinka daacadnimada isdhaafsiga ee Emirates 'Skywards iyo Gulf Air's Falconflyer.
Waxaa sidoo kale socda wadahadallo lagu bilaabayo iskaashiga xamuulka.
Waxaa la saxiixay maalintii ugu horreysay ee Dubia Airshow, is-afgaradku wuxuu bilow u noqon doonaa xiriirka dhow ee labada shirkadood. Is-afgaradka waxaa u saxiixay Sir Tim Clark oo ah Madaxa Shirkadda Diyaaradaha ee Emirates iyo Ku-simaha Madaxa Fulinta ee Gulf Air Captain Waleed Alalawi. Xafladda heshiiska lagu kala saxiixday ayaa waxaa sidoo kale ka soo qeyb galay xubno ka socday shirkad kasta oo qeyb ka ah maamulka sare ee shirkadda.
Macaamiisha ku safraya duullimaadyada Emirates iyo Gulf Air waxay ballansan karaan safarka hal-tigidh ah oo ay wataan kharashyo tartan ah, iyo hubinta shandad-joojin ah oo ay ku tagaan meelaha ugu dambeeya. Emirates waxay marka hore gelin doontaa koodka suuqa ee “EK” ee duullimaadyada Gulf Air ee u dhexeeya Baxrayn iyo Dubai, iyo is-dhaafsiga, Gulf Air waxay ku dari doontaa koodkeeda suuqa ee “GF” waddooyinka Emirates.
Sir Tim Clark, Madaxweynaha Emirates Airline ayaa tiri: "Waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno Gulf Air si aan u horumarino heshiiska codeshare, kaas oo macaamiisha siinaya doorashooyin si weyn loo xoojiyay, jadwal ku habboon, iyo dabacsanaan si ay ugu xirmaan Dubai iyo Bahrain, iyo wixii ka baxsan magaalooyinka ee shabakadeena dheer ee safarka dheer. . Waxaan aaminsanahay in iskaashigeena cusub uu faa’iido dhab ah u keeni doono macaamiisheena iyo ganacsigeena, heshiiska maantana waa tallaabo wax ku ool ah oo iskaashigeenna ah, waxaanan u soconnaa sidii aan u sii xoojin lahayn mustaqbalka.”
Intii ay munaasabadu socotay. Ku simaha madaxa fulinta ee Gulf Air ayaa yiri: "Tani waxay noqon doontaa iskaashi cajiib ah oo u dhexeeya mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu horreeya gobolka Khaliijka iyo mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka. Waxaan ku hanweynahay in aanu sahamino fursadaha Emirates si aanu u ballaadhinno gaadhistayada isla markaana aanu ku fidinno adeegyadeena boutique rakaabka Emirates marka aanu ku duulayno shabakadayada. Gulf Air iyo Emirates waxay ka shaqeeyaan duulimaadyo badan oo u dhexeeya Bahrain iyo Dubai, heshiiskani wuxuu rakaabka siin doonaa doorashooyin badan oo ka baxsan xarumahayaga."
Marka codeshare la furo, macaamiishu waxay awood u yeelan doonaan inay ballansadaan safarkooda labada shirkadoodba imaaraadka.com iyo gulfair.com, iyada oo loo marayo wakaaladaha safarka ee internetka iyo sidoo kale wakiilada socdaalka ee degaanka.